Teknụzụ gecha-CESE2 (Thailand) CO., LTD
BIM Technology Centre nwere ahụmịhe bara ụba na ụlọ nke ụdị BIM, na -emepụta eserese iwu site na iji ngwanrọ BIM, ịchọpụta nkukota nke pipeline na inye aka na ntinye na saịtị, ọ na-emetụtakwa teknụzụ BIM na ntinye na njikwa nke nnukwu ọrụ , dị ka njikwa ihe inyeaka, amụma ọnụahịa, nkwekọ ihe owuwu ụlọ na mkpebi siri ike nke atụmatụ, akụkụ ndị emepụtara, na-emeziwanye ogo ọrụ.
Site na ịrị elu nke teknụzụ kọmpụta kọmpụta, ikuku nkesa ikuku ikuku dị ọcha apụtawo dị ka teknụzụ na-enweghị atụ n'ịrụ ọrụ injinịa. Ndi otu oru CFD emeela nkwekorita nke analogue na nkesa ikuku di iche iche, okpomoku na iru mmiri nke onodu di omimi nke ime ulo di ocha site na ichota ngwanrọ CFD, ma nwee oganihu ohuru, na-enye nkwado oru na ahia na imewe HVAC.
Nkwenye GMP bụ njikọ dị mkpa maka ụlọ ọrụ ọgwụ iji nweta ikikere ọrụ mgbe emechara ọrụ. Dika nbuputa uzo GMP na GSP di nma, China emeela ka iwu ya na njikwa ya sie ike, o karikwara ulo oru ogwu ike igabiga nkwenye GMP. Iji nye ọrụ ka mma na ụlọ ọrụ ọgwụ, ụlọ ọrụ guzobere ebe nyocha GMP iji nye ọrụ nyocha na ụlọ ọrụ ọgwụ, ma nyere ha aka ịfefe nkwenye GMP nke ọma.